Bibi-Khanym, 14 Mar 2014 (Alldhooftinle.com)
Shiinaha Waxuu Dowlada Baraasiil Ka Codsaday Iney Ama U Ogoladaan Inuu Wershado Ka Sameysto Brazil Ama Joojiyaan Cadhada Ay Ka Cadhoonayaan Alaabtiisa Raqiiska.
Dowlada Baraasiil ayaa ka cadhootay sida alaabta Shiinuhu u qarqisay dalka Brazil. Madaxweyne ku xigeenka Brazil Michel Temer ayaa u sheegey madax ka socotay dalka Shiinaha inaan dowlada Barassiil aqbali karin in Shiinuhu daad ku soo rogo Baraasiil. In ka badan 600 shirkadood oo reer Baraasiil ah ayaa dacwad u gudbiyey dowladooda iyagoo sheegaya in hadii aan laga moosin uu daadka shiinuhu qaadi doono.
Shiinaha iyo Baraasiil waxay ku wada jiraan kooxda la yiraahdo BRICS oo kala ah: Baraasiil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha iyo Koonfur afrika. Kooxdan oo raba inay xidhiidh dhaqaale oo dhow yeeshaan si ay isaga celiyaan reer galbeedka, ayaa waxa hadda soo muuqanaya in Shiinuhu yahay kan ugu faa'iidada badan wadamada ku bohoobay ururkan waayo wuxuu helayaa cashuur dhaafid fara badan.
Baraasiil ayaa sanadkan horaantiisii soo saartay sharci ah in baabuurta dalkooda la geynayo ay cashuurtoodu noqon doonto 30%, iyagoo ula jeeda baabuurta raqiiska ah ee Shiinaha ka imanaysa inay yareeyaan. Laakiin taasi waxay keentay in Shiinuhu weydiistaan dowlada Baraasiil inay baabuurta ku sameeyaan Baraasiil gudaheeda taasoo Baraasiil ay ilaa hadda ka warwareegeyso.
Shiinuhu waa dalka labaad ee aduunka xaga dhaqaalaha, Baraasiilna waa dalka lixaad ee ugu dhaqaale badan aduunka, haddii ay is kaashaadaana waxay noqon karaan xoog dhaqaale oo aan la loodi karin, laakiin Shiinaha oo lagu yaqaan inuu meel kastaba alaabtiisa jaban ku hafiyo ayaa keenta in wadamo badani dib ugu fiirsadaan xiriirkooda ganacsi ee ay Shiinaha la leeyihiin.